1. Jereo ny Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, edisiona faha 10 (1993), “redemptioner.” 2. Webster’s New World College Dictionary, boky nivoaka faha 3 (1988), “redeem.” 3. “Ny Zanak’Andriamanitra dia efa nanonitra ny fahotana fototra ka ny fahotan’ny ray aman-dreny dia tsy azo valiana eo ambonin’ny lohan’ireo zanaka, fa madio ireo hatry ny fanorenana izao tontolo izao” (Mosesy 6:54). Handresy ny fahafatesana ny rehetra ary hitsangana ka tsy ho mety maty amin’ny alalan’ny Fanavotan’i Kristy. Ankoatra izany dia handresy ny fahafatesan’ny vatana ny rehetra amin’ny alalan’ny fitondrana azy ireo miverina eo anatrehan’Andriamanitra mba hotsaraina. Hoy i Jesoa hoe: “Toy ny efa nanandratan’ny olona Ahy [teo amin’ny hazofijaliana] dia toy izany koa no hanandratan’ny Ray ny olona hijoro eo anoloako mba hotsaraina amin’ny asany” (3 Nefia 27:14). Ireo izay nodiovina tamin’ny fahotana dia hitoetra hiaraka amin’Andriamanitra any amin’ny fanjakan’ny lanitra, saingy ireo izay tsy nibebaka sy maloto dia tsy afaka ny hiaraka hipetraka amin’ny Andriamanitra masina iray ary tsy maintsy mandeha izy ireo aorian’ny fitsarana ka hianjadian’ny fahafatesana ara-panahy indray. Lazaina ho toy ny fahafatesana faharoa izany na hoe ianjadian’ny fahafatesana ara-panahy fanindroany. (Jereo ny Helamàna 14:15–18.) 4. Raha mikasika ny fahotantsika manokana dia milaza ny soratra masina fa misy olona sasany tsy afaka mahazo ny famonjena: “Koa ny ratsy dia mijanona ho toy ny tsy nisy fanavotana efa natao, afa-tsy ny famahana ny famatoran’ny fahafatesana” (Almà 11:41). “Fa izay tsy mampihatra finoana ho amin’ny fibebahana kosa dia mankahatra ny lalàna manontolon’ny fitakian’ny fahamarinana; koa amin’izay manana finoana ho amin’ny fibebahana ihany no tanterahina ny drafitry ny famonjena lehibe sy mandrakizay” (Almà 34:16). Raha manda ny Sorompanavotan’ny Mpamonjy ny olona iray dia tsy maintsy manefa ny trosa takian’ny fahamarinana ny tenany manokana. Hoy i Jesoa hoe: “Fa indro Izaho Andriamanitra dia efa nijaly tamin’ireo zavatra rehetra ireo ho an’ny rehetra, mba tsy hahatonga azy ireo hijaly raha mibebaka. Nefa raha tsy mety mibebaka izy ireo dia tsy maintsy mijaly tahaka Ahy” (Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 19:16–17). Fantatra amin’ny hoe helo ny fijalian’ny olona iray vokatry ny fahotana izay tsy nahazo fanavotana. Izany dia midika hoe eo ambanin’ny ziogan’ny devoly ary faritana ao anatin’ireo fanoharana ara-tsoratra masina ho toy ny voafatotra amin’ny rojo vy na farihy afo sy solifara. Nitalaho tamin’ireo zanany lahy i Lehia mba hisafidy ny Fanavotan’i Kristy “Ary tsy hifidiananareo ny fahafatesana mandrakizay araka ny sitrapon’ny nofo sy ilay ratsy izay ao anatiny, izay manome fahefana ny fanahin’ny devoly mba hambabo sy hitondra anareo midina any amin’ny helo hahazoany manapaka aminareo ao amin’ny fanjakana ihany” (2 Nefia 2:29). Na dia izany aza, noho ny Sorompanavotan’i Jesoa Kristy dia misy farany ny helo ary ireo izay voatery handalo izany dia “havotana amin’ny devoly [amin’ny] fitsanganana amin’ny maty farany” (Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 76:85). Ireo heverina hoe “zanaky ny fahaverezana” vitsivitsy no “hany hananan’ny fahafatesana faharoa hery [farany]; eny marina tokoa, ireo no hany tsy voavotra amin’ny fotoana mahamety izany amin’ny Tompo, aorian’ny fiaretana ny fisafoahany” (Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 76:32, 37–38). 5. Tamim-pifaliana no nilazan’ny Mpaminany Joseph Smith hoe: “Aoka ny maty hiventy antsam-piderana mandrakizay ho an’i Imanoela Mpanjaka, izay efa nanokana talohan’ny nisian’izao tontolo izao ny fomba hahafahantsika manavotra azy ireo hiala avy ao amin’ny fonjan’izy ireo; fa handeha malalaka ny voafonja” (Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 128:22). 6. Jereo ny Victor Hugo, Les Misérables (1992), 91–92. Teo alohaManaraka